Maodzanyemba ePacific Airways kubhururuka matsva eBoeing majeti pakati peUS neAsia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Maodzanyemba ePacific Airways kubhururuka matsva eBoeing majeti pakati peUS neAsia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kuwanikwa kweBoing 757-200s ndiro danho rekutanga muchirongwa chebhizinesi reNorth Pacific. Asati apinda pabasa, ndege ichaenda kuzere C-level yekuchengetedza cheki neCertified Aviation Services LLC (CAS), inotungamira yekuchengetedza, kugadzirisa uye kugadzirisa (MRO) femu muSan Bernardino, California. Iyo Alaska-based carrier inotarisira kuenderera mberi ichiwedzera ngarava dzayo apo iri kugadzirira vafambi vendege.
Northern Pacific Airways inobvuma kutenga yayo yekutanga nhanhatu Boeing 757-200 ndege.
Maodzanyemba ePacific Airways akapedza iyo transaction yekusangana nechikamu chayo chekutanga zvikepe zvinodiwa.
Ndege yekutanga yeBoeing 757-200 yekutanga mukati meiyi kutenga ichaendeswa kuNorth Pacific Airways nekukasira,
Vhiki rino, Anchorage-based Northern Pacific Airways, chikamu chine muridzi chose cheFLOAT Alaska LLC, yakabvuma kutengwa kwendege nhanhatu dzayo dzekutanga - Boeing 757-200s. Iyo yendege yakapedzisa iyo transaction kusangana nechikamu chayo chekutanga zvikepe zvinodiwa. Ndege yekutanga mukati meiyi kutenga ichaunzwa nekukasira.
Ndege inotarisira kupa sevhisi pakati pemapoinzi muUS neAsia, kuburikidza neAnchorage, Alaska.
Kuwanikwa kweBoing 757-200s ndiro danho rekutanga mukati Kumusoro kwePacifichurongwa hwebhizinesi. Asati apinda pabasa, ndege ichaenda kuzere C-level yekuchengetedza cheki neCertified Aviation Services LLC (CAS), inotungamira yekuchengetedza, kugadzirisa uye kugadzirisa (MRO) femu muSan Bernardino, California. Iyo Alaska-based carrier inotarisira kuenderera mberi ichiwedzera ngarava dzayo apo iri kugadzirira vafambi vendege.
Zvakanakisa mukirasi Boeing 757-200 inofambiswa nemapatya 36-600 Rolls-Royce RB211 ichichera maturbo engines ekukwira kurema kwe255,000 lbs. Ndege inokwanisa kutakura vanopfuura mazana maviri kuenda kwavanenge vachienda nendege imwe neimwe, ine huwandu hwe200nm / -3,915km pamoto. Ndege-imwe chete yemudhudhudhu haina kudhura kubhururuka kupfuura vamwe vayo vane muviri wakakura, asi iine huwandu hwakakura kupfuura dzimwe ndege dzakaenzana saizi. Pamusoro penguva yechirongwa chavo chekugadzira, anopfuura 7,250 Boeing 1,049-757s akaunzwa. Ndege yakanyatsokodzera kunongedza-kuenda-kunongedzera, kufamba kwenguva refu, uye ine nzvimbo yakakwana yekugarisa vatakuri vese.
"Kumusoro kwePacific inodada kuunza idzi ndege dzine simba sehwaro hwezvikepe zvedu, "akadaro Rob McKinney, Chief Executive Officer weNorthern Pacific. “Iyo Boeing 757-200 zvichatibatsira kuwana mari nekuchengetedza mashandiro patinenge tichipa vatengi vedu mukana unofadza wekufamba. ”
Northern Pacific Airways (NP) inoronga kupa ndege pakati pemapoinzi muUS nemapoinzi kuEast Asia nekubatanidza kuburikidza neTed Stevens International Airport muAnchorage, Alaska.
FLOAT Alaska LLC, inotungamirwa naRob McKinney CEO, ikambani yemubereki yeRavn Alaska, Northern Pacific Airways, FlyCoin, uye mamwe maAlaska-based.